Soo dejisan YAC 6.7.150.31075 – Vessoft
Ayna System /
Soo dejisan YAC
YAC – qalab dhameystiran si loo hagaajiyo waxqabadka nidaamka. software The kuu ogolaanayaa inaad si aad u nadiifiso nidaamka ka files dhacsan ama ku meel gaar ah oo si deg deg ah ka saar software laga dhigo. YAC u saamaxaaya in ay dardar-socod RAM ah taasoo lid ku ah nidaamka ayna ka aqooneed. software wuxuu bixiyaa ilaalinta nidaamka fayrusyada, spyware iyo browser xaasidnimo ah iyadana. Sidoo kale YAC waa ay xakameyn karaan calammo advertising in daalacashada iyo Rasuulkiisa kala duwan.
Removal of nidaamka qashin
Hagaajinta ee waxqabadka guud
Ilaalinta hanjabaadaha kala duwan
YAC Software la xiriira:
Aalad awood leh si ay u nadiifiyaan tayadoodii nidaamka. Software The kuu ogolaanayaa inaad si aad u nadiifiso nidaamka off faylasha loo baahnayn iyo qabtaan qaadidda buuxda oo software.
Agabka in ay u adeegaan oo hagaajiyo waxqabadka nidaamka. software The awoodo si uu u xaliyo khaladaadka ku jira nidaamka iyo nadiifiso diiwaanka ka soo qashinka.
Ayna System Games
Tool si loo hagaajiyo waxqabadka nidaamka iyo tayadoodii gameplay ah. Software wuxuu kuu ogol yahay in ay fuliyaan ayna ku hab toos ah ama buuga.
CCleaner 5.35.6210 Standard, Professional iyo Portable
qalab The universal in la helo versions cusub ee software-ka ku rakiban. utility ayaa wax ku ool ah uu baaritaanku habka iyo bandhigayaa liiska software talinayaa cusboonaysiinta.
Glary Utilities 5.77 Standard iyo Pro
set ee qalabka si aad u nadiifiso iyo tayadoodii nidaamka qalliinka. software The kuu ogolaanayaa inaad si ay u maareeyaan nidaamka iyo saaro faylasha aan loo baahnayn.
Software ayaa si kor loogu qaado wax-qabadka your computer. Software ka kooban yahay kala duwan oo ka mid ah qalabka si loo dedejiyo oo ay tayadoodii nidaamka.
Aalad awood leh in la ogaado khatarta maqan iyo saarto spyware ah xaasidnimo. Utility wuxuu isticmaalaa technology daruurtii si ay u ilaaliyaan in waqtiga dhabta ah.
Any Video Converter 6.1.3 Ultimate iyo Professional
qalab The functional for diinta file soonka iyo tayo. software The taageertaa qaabab loo jecel yahay iyo waxa ku jira taariikhda la heli karo si loogu badalo faylasha.
Ku haboon ciyaaryahan si Radidiyaha ah qaabab loo jecel yahay. Software ayaa kuu ogolaanaya in aad nuqul ka music ah in qalabka la qaadi karo, oo maqla adeegyada raadiyaha caan ah.
SUPERAntiSpyware 6.0.1242 Free Edition iyo Professional
software The in uu kaydiyo faylasha kasta oo lagu kaydiyo daruurtii. software wuxuu taageeraa .Wadashaqayntaas of files u dhexeeya qalabka iyada oo internet-ka.